30 May 2017 . 5:34 PM
အမေရိကရဲ့သေဆုံးမှုငါးခုမှာ လေးခုက ဆေးလိပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အပြောလွယ်ပေမယ့် လုပ်ရင်တော့တော်တော်ခက်တဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ နောက်ပြီးတစ်ယောက်တည်းဖြတ်တာထက်စာရင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကကိုယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်တာကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တာက ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ အခုလို ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့နည်းပညာအကူအညီတွေလည်း ရနိုင်နေပါပြီ။ အခုလိုမျိုး No Tobacco Dayမှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကူအညီပေးမယ့် အယ်ပလီကေးရှင်းလေးတွေကို အခရာမှဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) LIVESTRONG MyQuit Coach
ဆရာဝန်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ ဒီ App ဟာ ကိုယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့တော့ အစီအစဉ်တွေကို ချမှတ်ပေးမယ့်နည်းပြတစ်ဦးလိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ဆေးလိပ်သောက်သုံးတာတစ်နေ့ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ၊ နီကိုတင်းပမာဏဘယ်လောက် သုံးနေလဲအကုန်လုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပေးပါမယ်။ အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုခြင်းအလိုက် ရည်မှန်းချက်တွေချထားပြီး နောက်ဆုံးမှာဆေးလိပ်ပြတ်သွားတဲ့အထိအကူအညီပေးပါမယ်။ ကိုယ်တိုးတက်ရင်တိုးတက်လာသလောက် ဒီ App ကအမှတ်တွေလည်းတဲ့အပြင် ကိုယ်နဲ့ဘဝတူဆေးလိပ်ဖြတ်နေတဲ့သူအချင်းချင်းလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
(2) Quit It Lite
ဆေးလိပ်မသောက်တော့တာနဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဆိုတာကို ဒီ App က ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တာနည်းလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဆေးလိပ်ကတဆင့်ရောက်နေတဲ့ ကတ္တရာဓါတ်ဘယ်လောက်လျှော့သွားပြီဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်မသောက်တော့လို့ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်အထိချွေတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပါ သိနိုင်ပါတယ်။
(3) Quit Smoking: Cessation Nation
ဆေးလိပ်ကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာက တကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ဒီ App ကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေကို တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထားပြီး ဖြတ်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါတယ်။ ဒီ App မှာဆေးလိပ်သောက်တာနည်းလာတာနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လောက်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မယ်၊ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိမယ် ဆိုတာမျိုးကို သိရမယ့်အပြင် အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်လည်းပါပါတယ်။ ကိုယ်အနေနဲ့ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒီ App မှာပြန်မသောက်ဖြစ်အောင် ဟန့်တားပေးမယ့် ဂိမ်းတွေပါပါတယ်။
(4) Craving to Quit
သင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ App ကတော့ ၂၁ ရက်အတွင်းဆေးလိပ်ပြတ်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့က ပိုက်ဆံပေးပြီးသုံးရတဲ့ App ပါ။ သုံးရက်စမ်းသုံးနိုင်ပြီး ပရိုဂရမ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့တစ်လကို ၂၅ ဒေါ်လာကျသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့ချင်းအတွက် လိုက်နာရမယ့်ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုနှုန်းကိုလည်း အမြဲဖော်ပြပေးပါမယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုသတိပေးမယ့်စနစ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကိုနည်းနည်းချင်းရည်မှန်းချက်တွေချခိုင်းပြီး နောက်ဆုံးဆေးလိပ်ပြတ်ဖို့အထိစွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(5) Quit Smoking — QuitNow!
ဒီ App ကလည်း ကိုယ်ဆေးလိပ်သောက်တာ ဘယ်လောက်လျော့သွားပြီ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျန်းမာရေးဘယ်လောက်ပိုကောင်းလာပြီဆိုတာမျိုးကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့တိုးတက်နှုန်းကိုလည်းလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကား ၄၄ မျိုးနဲ့ရနိုင်တဲ့အပြင် ဒီ App ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်သွားတဲ့သူ ၂ သန်းကျော်ရှိသွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။
(6) Quit Smoking with Andrew Johnson
ဒီ App ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ညှို့၊ အိပ်မွေ့ချပြီး ဆေးလိပ်ပြတ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပညာကုထုံးတွေစုဆောင်းထားတဲ့ ဒီ App က ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကိုနှိုးဆွပြီး ဆေးလိပ်ပြတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာကို လမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
(7) Smoke Free
ရှေ့က App တွေလိုပါပဲ။ ဆေးလိပ်ပြတ်လာတာနဲ့အမျှ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိမယ်၊ ကျန်းမာရေးဘယ်လောက်ကောင်းလာမယ်၊ ပြန်သောက်ချင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးကို အမြဲဖော်ပြပေးနေမယ့်အပြင် ကိုယ်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်းအချိ်န်တိုင်းသိနိုင်ပါတယ်။
ဒီ App ကတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးပါမယ်။ ဂိမ်းဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ ဖြတ်ရမှာပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်တော့ရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်စုမိမယ်ဆိုတာကတော့ App တိုင်းလိုလိုမှာကို ပါပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုသိနိုင်မှာဖြစ်သလို ဂိမ်းဆော့သလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ Level တွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်တာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်။
(9) Butt Out
ဒီ App ကတော့ စိတ်ခွန်အားတွေပေးပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အကူအညီပေးမှာပါ။ ကိုယ့်ကို စိတ်ခွန်အားပေးမယ့်ဓါတ်ပုံနဲ့စာသားတွေကို တစ်ခုခြင်းတွေ့နိုင်သလို ကိုယ့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုလည်း ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ဆေးလိပ်ဖြတ်နေတဲ့ရက်တိုင်းအတွက် တိုးတက်မှုကို ဂရပ်နဲ့လည်းပြပေးပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်ဘယ်လောက်တိုးလာပြီဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
(10) Get Rich or Die Smoking
ဒီ App ရဲ့နာမည်ကိုက ဆေးလိပ်သောက်ပြီး သေရင်သေ၊ မသေရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဆိုလိုပါတယ်။ နာမည်အတိုင်းပဲ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရင်ရင်ဘယ်လောက်စုမိမယ်၊ ဘာတွေဝယ်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေတဲ့ မက်လုံးတွေနဲ့ ဖြတ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးမှာပါ။ တခြား App တွေလိုမျိုးပဲ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်။